Korea Atsimo : Fitavozavozan’ny Fitondrana , Rakotry Ny Vaovao Tsy Marina Momba Ny Nanjo Ilay Sambo Ny Haino Aman-Jery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2014 14:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
‘Fehy’ mavo mifamatotra mitandavana amin'ny làlamben'i Seoul, manantena fahagagana tamin'ny faharendrehan'ny sambo Sewol. Sary avy amin'i Lee Yoo Eun.
14 andro izay no naharendrika ilay sambo Koreana Tatsimo izay nisy mpandeha an-jatony. Amin'izao fotoana izao 205 no azo antoka fa maty, 97 no tsy hita popoka.
Efa voasambotra ilay kapiteny sy ireo rehetra mpiasa tao anatin'ilay sambo. Nametra-pialàna teo anivon'ireo tsikera ny amin'ny fahataràn'ny fandraisana andraikitry ny governemanta tamin'io loza io ny Praiminisitra Chung Hong-won. Olona telo avy amin'ny biraon'ny Incheon, fikambanan'ny tantsambo ao Korea no nosamborina sy nomelohina ho namotika porofo.
Koa satria nivoaka ny antsipirihan'ny filalaovana tsy manjary nataon'ny governemanta Koreana Tatsimo momba iny faharendrehana iny, dia nitroatra ny hatezerana .
Lasibatr'ireo mpisera amin'ny aterineto ny manampahefana ary ny haino aman-jery mahazatra mpitahiry ny fomba taloha kosa manao boloky mamerina ireo fialan-tsinin'ny governemanta :
Ireo tsy fahaiza-mitantan'ny governemanta, ny fitavozavozany sy ireo lainga ary ‘ireo haino aman-jery manohy milaza ny lainga tsy mitsahatra… Ireny rehetra ireny dia naharomotra ny fianakavian'ireo niharam-boina. Taorian'ity loza nihatra tamin'ny sambo Sewol ity no nisehoan'ireo zava-miafina rehetra amin'ity firenena ity.
Tsy hita amin'ny vaovao intsony ny filoha. Nanjavona amin'ny vaovaon'ny haino aman-jery ny fitavozavozan'ireo manampahefana sy ireo hadisoana marobe ary ny tsy fahombiazan'ireo mpitantana voakasik'izany. Tahaka ny naharendrika ilay sambo Sewol sy ny fandosiran'ilay kapiteny voalohany ihany.
Asehon'ny haino aman-jery ny ampahan-dahatsary misy ireo karazan-tseho sy ny fihetsik'ireo manam-pahaizana nandritra ny famonjena voina tamin'ny faharendrehan'i Sewol. Ohatra ny hoe efa an-dalana ny asa – raha ny haino aman-jery no jerentsika. Na dia izany aza, tsy misy intsony ireo velona anampy ireo avotra teny amin'ny toerana nisehoan'ny loza. Tsy misy ny fivoarana, nefa ireo haino aman-jery dia mbola mitabataba foana. Tena samihafa ny zava-misy sy ny asehon'ny haino aman-jery.
Nohararaotin'ny mpanao politika mba hangalana tombontsoa ilay hatezerana tamin'ny loza.
Mpanao lalàna avy amin'ny antoko Saeunri izay antoko eo amin'ny fitondrana ohatra no nihandronan'ny rihitra tamin'ny fanendrikendrehana ray aman-dreninà niharam-boina iray ho vahiny avy lavitra “izay te- hanakorontana sy hiketrika fankahalana ny fitondrana.” aorian elin'izay dia nanazava ilay mpanao lalàna fa sary iray sandoka nifampizaràna tety anaty aterineto no nitrika azy ho amin'ny hadisoana.
Ary akehitriny nmpitandro filaminana dia manadihady mpanoratra iray izay nanoratra tao amin'ny Facebook hoe ” seho nokarakarain'ireo mpomba an'i Korea Avaratra izay te-hamafy fifanolanana sy fikorontanana amin'ny fiaraha-monina Koreana tatsimo” iny loza iny.
Efa mahazatra andavanandro amin'izao fotoana izao ny tetikady filazana olona ho ” mpitsikilon'ny mena” sy ” mpomba ny tavaratra [Koreana]”. Ahoana ny hatezerana entin'izany zavatra izany ? Ampangain'ny sasany ho “mpomba ny Tavaratra” na ” mpitsikilon'i Korea Avaratra” ny hafa isaky ny misy tsy fifanarahana. Ireo olona ireo izay tsy mbola nanary toky tamin'ny fanavotana ny Sewol, ireo olona ireo izay mora tohina aminà fanehoankevitra tahaka izany. Diniho ihany izay lazainareo.
Koa satria latsaka anaty fahakiviana lalina ny firenena ary mitombo ireo feo manakiana ny fitondrana dia manomboka milalao ilay teny malaza hoe “Mpomba ny Tavaratra” ny antoko eo amin'ny fitondrana sy ireo mpanara-dia azy. Mampisaina ahy ny amin'izay nitarika ny firenena ho amin'ity loza ity izany tontolo izany. Tsy manana havaly isika raha tsy afaka manova mpitondra izay afaka handrakotra ny hadisoan-tetikady amin'ny hoe tetiky ny “Mpomba ny Tavaratra”.